နည်းပညာနှင့်သီတင်းရပ်ဝန်း: > နားဆင်ရန် +ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် - Flash သီချင်းများ+MP3သီချင်းများ+MP4သီချင်းများ(((1)))
ဟာဂျီသန်းလှဦး@hapmala 53 days ago
မင်းအကြောင်းအိမ်မက် မိန်းမယူရင်စဉ်းစားကျ ချစ်သူရင်ခွင် ၀တ်မှုံ သီချင်းတပုဒ်မင်းဆိုလိုက် We are the world သူ့ကိုကျနော်ချစ်သည် မင်းမုန်းမှာစိုးတယ် မင်းလေးကိုသိပ်ချစ်လို့ မင်းသိလာမယ် ယုံကြည်ပေးပါ မျှော်လင့်မထားတဲ့အချိန် ကလေး လေး ချစ်ရက်နဲ့ ယုံကြည်ခြင်း ဆန္ဒတစုံ အလွမ်း ဖူးစာရှင် သဲသဲလှုပ် ဝေခွဲမရပါလား လိုက်ဖက်တဲ့ဘ၀ ငါ့ရင်ခွင်ကို အဆင်ပြေပါစေ Gtalk သူ ၀န်ခံလိုက်ပါ ရီးစားစာ တခါထဲချစ်ချင်လို့ပါ (၂) မိုး တိုးတိုးလေး ကြည်နူးခွင့် မုန်းမေ့ဖို့မလွယ် မလွယ်ပါကွယ် ကျောင်းသီချင်း ကြိုနေစေချင်တယ် ချစ်ကံဆိုး အပြုံးလေး နတ်သမီး လမင်းသို့ သီချင်းမဲ့ဂီတာ အမောပြေ ဆုတောင်းမယ် ဆုတောင်းမယ်(၂) ဟိုအရင်လို မိုးသည်းထဲမှာ အမေ နင်ပြန်လာခဲ့ ပေးဆပ်ခွင့် အချစ်အတွက်ကံမကောင်းခဲ့သူ ချစ်တယ်ဟုတ် ဖန်သားနန်းတော် ဒို့လည်းလိုက်မယ် မြတ်နိုးသူအတွက် ပုံရိပ်လေး ပြန်တော့ကွယ် အချစ်ကိုသိချိန် မင်းတယောက်သာ မမချစ်လို့မဖြစ် အမြတ်နိုးဆုံး ချစ်ခွင့်ရခြင်ပြီ ခွဲခွာရက်သူ ဘာကြောင့်လဲ အတ္တ စာမျက်နာ ၁၅ မျက်နာများတဲ့မောင် ဒီလမ်းမကြီးရဲ့ ဘေး အင်းယားသို့ နှစ်ပတ်လည်(၂) မုန်းဖို့လွယ်တယ်မေ့ဖို့ခက်တယ် ပြန်လာပါကွယ် သူသိပါကွယ် All out of love စလုံးကချစ်သူ ပတ်သက်ခွင့်ပြုပါ တကယ့်ပုံပြင် ကောင်မလေး တယောက်သောသူအတွက် မင်း မရေရာဘူး မအေးကိုချစ်လို့ ဆက်ချစ်ခွင့်ပေးပါ ညှို့နှိင်လွန်းတဲ့သူ ခွင့်ပြုတယ်ခွင့်လွှတ်တယ် ကြိုပြီးတောင်းပန်တယ် ရဲလေး သီချင်း ရီးစားထားတဲ့အရွယ် အချစ် = အချစ် သီးသန့်ဖြစ်တည်မူ ကိုကို့စိတ်ကူး မမက တကယ်ဆိုအချစ်ဘဲလိုတယ် ကြယ်ကြွေကောင်းကင် အချစ်များသူ့ဆီမှာ ပြန်တွေးကြည့် ယုံကြည်တော့အချစ် ကောင်ကလေးကကောင်မလေးကို နေရာ တယောက်သော သူ အဆုံးမဲ့ အလွမ်းပြေအနမ်း အလွမ်းဆုလဒ် ဘာဖြစ်ဖြစ်ချစ် မင်းသိလာမယ်2ပြန်မဆုံဖြစ်ကျရင် နောက်ဆုံး အမှန်သိခွင့် (ဒိုးလုံး) ချစ်ခွင့်ရချင်ပြီ နှစ်ကိုယ်တူချစ်သမျှ တခါခါ စိတ်လျှော့လိုက် ရိုးရှင်းသောဘ၀ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မူ ဓမ္မဒါန လမ်းကြုံရင်ပြောပေးကြပါ StayWithMe ချစ်ခဲ့တာလားရူးခဲ့တာလား BadGirl သန်ခေါင်ယံည နုတ်ဆက်စာ အလွမ်းပြေအနမ်း ၂ ပြန်မဆုံဖြစ်ကျရင်၂ အချစ် နှောင့်ယှက်သူ ပြန်မရဘူး ငါ့ရင်ခွင်ကို ၂ မေ့တော့မေ့သေးဘူး မြတ်ဆုမွန် မကြာခင်မှာကြင်နာမယ် နေချင်တယ်မင်းအနား ဝေးလို့နေမလားမေ့လို့နေမလား ရွှေတိဂုံ(၂) သံယောဇဉ် သံစဉ်တွေနဲ့ချော့သိပ်မယ် ကောင်မလေး နောက်ဆုံးအချစ် မချစ်နဲ့တော့ မျှော်လင့်ခြင်းကွင်းပြင် MyHeartWillGoOn လွမ်းရဲမှ ၀ိရောဓိ အလွမ်းဝင်္ကပါ မင်းတယောက်သာ BeWithYou ကိုယ်မညာချင်တော့ဘူး ဆွေးမြေ့အသဲ သံယောဇဉ် ချစ်သူထားခဲ့တော့ ချစ်ဦးမေ အချိန်တိုင်းပဲ နားလည်ပါ ကြယ်
..ရွှေတိဂုံ . ကြောက်တတ်သူများနားမထောင်ရ ကြွေပါစေ - R ဇာနည်ကြွေသူနှစ် ကောက်သူတစ် - ချစ်ကောင်း ကမ္ဘာအပြင်ဘက်
ကိုကို ကောင်မလေး ကြည်နူးခွင့် ကြွေးဟောင်းဆပ်ခွင့်ပြုပါအမေ ကျောင်းသီချင်း
ကြိုနေစေချင်တယ်......ချစ်သူကို...ချမ်းမြေ့ပါစေ ချစ်သူရင်ခွင် ချစ်ကံဆိုး ခွင့်လွှတ်ပါတော့ ချစ်ရက်နဲ.
ရိုးရာ.....ထူးဆန်းလွန်းတဲ့အချစ်.....ထာဝရအတွက်လား.....ဒီရင်မှာ - Nကိုင်ရာ.....ဒီတညတော့.....နှစ်ပတ်လည် - Bunny Phyo
နတ်သမီး.....နှလုံးသားရှိတဲ့အရပ်.....နေညိုရင်.....နောက်ဆုံးရင်ခွင်.....နွေဦးကဗျာ .....ပြော -
စဉ်းစားကြ.....မင်းမုန်းမှာစိုးတယ် မင်းလေးကိုသိပ်ချစ်လို့မင်းကိုသတိရရင် -
ကောင်းကောင်း+မို့မို့လွင် .....မင်းသိလာမယ် .......မလွယ်ပါကွယ်
.....မျောက်ဖြစ်ချင်တယ် - ခန့်ဖြိုးမြန်မာမလေး - ပြည်စိုး.မင်းရဲ့အနား .....မင်းလေးကိုသိပ်ချစ်လို့.....ယုံပါရင်သို့.
....ယုံကြည်ပေးပါ -Bunny Phyo.....ရိုမီယို ဂျူးလီးယက်.....ရင်ခုန်ဘက်သို့တမ်းခြင်း.....လိုက်ဖက်တဲ.ဘ၀.....လမ်းမခွဲကြေး
.....အိမ်-ဓီရာမိုရ်.....အချိန်လွန်ငှက်.....အလင်းရောင်.....အလွမ်းပြေအနမ်း - Bunny Phyo အပြုံးလေး
.....အဖြူရောင်သူငယ်ချင်း - အောင်ပြည့်ဖြိုး.....အလွမ်း-လေးဖြူ .....အမောပြေ
Selection Flash Songs
တိုးတိုးလေး မျှော်လင်.မထားတဲ.အချိန် အင်းယားသို့ သီချင်းမဲ.ဂီတာ ပတ်သက်ခွင့်ပြုပါ လမ်းဆုံ မ
ညစဉ်ညတိုင်း.မြတ်နိုးသူအတွက်. မရေရာဘူး ပြန်လာပါကွယ် မုန်းမေ.ဖို.မလွယ်...ညရဲ.အလင်း
နေညိုရင် တိတ်တခိုး ဆုတောင်းမယ် မျောက်ဖြစ်ချင်တယ် ချစ်ခြင်းတရား မ အရမ်းပဲချစ်နေပြီ ပြော
မျောလွင်.နေတဲ.တိမ် ဒီလမ်းမကြီးရဲ့ ဘေး ဆက်ချစ်ခွင့်ပေးပါ အပြစ်မမြင်ပါဘူး.......ကြည်နူးခွင်.
အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း မျက်နာများတဲ့မောင် နတ်သမီးလေး နှလုံးသားရှိတဲ.အရပ်
မလွယ်ပါကွယ်.......အလွမ်း အချစ်အတွက်ကံမကောင်းခဲ့သူ ရိုမီယိုဂျူးလီယက်
ဒွေး ဘာကြောင့်လဲ မင်းကိုသတိရရင် လေပြေညှင်း ပေးဆပ်ခွင့် ကြွေပါစေ
နောက်ဆုံးရင်ခွင် ဒီတညတော. မင်းအကြောင်းအိမ်မက် လိုက်ဖက်တဲ.ဘ၀ မုန်းဖို့လွယ်တယ် မေ့ဖို့ခက်တယ်
ပူစီ ကြယ်တွေစုံတဲ.ည စိတ်ကူးယဉ်အနမ်းများနဲ. ဖန်သားနန်းတော် ကောင်မလေး ကြိုနေပါ အလွမ်းပြေအနမ်း
ယုံကြည်ပေးပါ ဟိုးအရင်လို ချစ်ကံဆိုး ရင်ထဲကပဲချစ်နေမည် အမေတခုသားတခု အမောပြေ
ရင်ခုန်ဘက်သို.တမ်းချင်း မင်းတယောက်သာ အပြုံးလေး ဆု တွဲဖက်အပြုံး ငါ.ရင်ခွင်ကို
အဆင်ပြေပါစေ G talkသူ အချစ်ကိုသိချိန် လမင်းသို. ၀န်ခံလိုက်ပေါ. ရီးစားစာ ပြန်တွေးကြည်. တသက်လုံးအတွက်
သနပ်ခါးချစ်သူ ဆုတောင်းမယ် နှစ်ပတ်လည် အလွမ်း အမေကဆူလိမ်.မယ် သဲသဲလှုပ် နွေဦးပုံပြင်
သူ.ကိုကျွန်တော်ချစ်သည် အတ္တ မ မချစ်လို့မဖြစ် စလုံးက ချစ်သူ သူလေး လုံးဝမမေ.သေးဘူး မိန်းမယူရင်စဉ်းစားကြ
ဒီရင်မှာ ထာဝရအတွက်လား တကယ်.ပုံပြင် ကောင်မလေး တောဂေါ်လီ ဆန္ဒတစုံ ချစ်သူ.ရင်ခွင် ချစ်ရက်နဲ.
ကြွေးဟောင်းဆပ်ခွင်.ပြုပါအမေ ကိုကိုက မင်း စာမျက်နာ ၁၅ ကြွေသူနှစ်ကောက်သူတစ် လမ်းမခွဲကြေး ဖူးစာရှင် ချစ်ခွင့်ရချင်ပြီ မို:.အရင်လိုပဲအရင်အတိုင်း
..နေပါစေ..ရင်ထဲကလာတဲ.သီချင်းလေး...I love you..ငါ.ရဲ.အနား...နှောင်ကြိုးလေးတမျှင်...ချစ်ခြင်းတရား
..အကြည်.တချက်...Never be replaced..ချစ်ကံဆိုး..ရွက်လွှင်.ခဲ.ပါပြီ
Without You..When u say nothing at all...U took my heart away...The power of love..The day u went away...Take me to your heart...Save the best for last
Right here waiting for u ...Rhythm of the rain...Promise...Over and over...Only love...Only hope ...My valentine...My love...All
out of love Mouse love rice...Lover's concert
...Just to say I love u...I lay my love on u...I cry...oh..Africa..Power of dream
bunny ဖြိုး-stay with me
IC 15th Anniversary
ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ
ဘာလာလာ (၁၊ ၂)
အိန်ဂျယ်လ် (Hip Hop)
9 Night Hip Hop Show
Eazy FM (Live Show 1
Eazy FM (Live Show 2
The Best Mp3 Songs!
သူငယ်ချင်းများ အားလုံး အတွက် Mp3 သီချင်းများကို သီးသန့်တင်ပေးထားပါသည်။
2009 ထွက် သီချင်းများမှ အကောင်းဆုံးသီချင်းများ D ဖြိုး ဒီကောင်မလေးအတွက်.mp3 D ဖြိုး အိပ်မက်နိဂုံး .mp3 D ဖြိုး နှမျှောတယ်.mp3 - ဆည်းဆာအလှခွေသစ်မှ ဇော်ပိုင်၏ သီချင်း ပြည့်စုံလွန်း.mp3 - ဆည်းဆာအလှ ခွေသစ်မှ ချမ်းချမ်းသီဆိုထားသော " ညှို့နိုင်လွန်းတဲ့ ကျမချစ်သူ.mp3 - ဧသင်ချိုဆွေ ရှုပ်ထွေးခြင်း.mp3 - ဧသင်ချိုဆွေ မင်းသမီး.mp3 - ဧသင်ချိုဆွေ လမ်းမခွဲကြေး .mp3 - ဧသင်ချိုဆွေ လေပြေ.mp3 - ဧသင်ချိုဆွေ ရပ်.mp3 - ဧသင်ချိုဆွေ အပြုံးလေး .mp3 - ဧသင်ချိုဆွေ ပြိုလဲကြေကွဲ .mp3 ဝိုင်ဝိုင်း၏သီချင်းကောင်းများ
. - Fool again .WESTLIFE.mp3 - If I let you go WESTLIFE.mp3 - No matter what WESTLIFE.mp3 - Flying without wing WESTLIFE..mp3 - I haveadream WESTLIFE.mp3 - Sware it again WESTLIFE.mp3 - I lay my like on you WESTLIFE.mp3 - Season in the sun.mp3 WESTLIFE - Big big world.mp3 - Nothings gonna change my love for you.mp3 - Truely , madly and deeply.mp3 - Right here waiting.mp3 - Unbreak my heart.mp3 - The power of love.mp3 ယနေ့အတွက်ကိုမျိုး၏ အထူးလက်ဆောင်သီချင်း . MP3- I M B နေချင်တယ်မင်းအနား .mp3 - I M B သနပ်ခါး .mp3 - I M B မျက်နှာ .mp3 - သိမ်းထားခွင့် N ကိုင်ရာ .mp3 - . အရင်ကဇတ်လမ်း ဟန်ထွန်း .mp3 - ရင်ခုန်ဘက်သို့တမ်းချင်း ဟန်ထွန်း.MP3 - အပြစ်မမြင်ပါဘူး ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း.mp3 - မျောလွင့်နေတဲ့တိမ် ကောင်းမြတ်လေး .mp3 - လင်းနစ် ဒီဇင်ဘာည .mp3 - လမ်းဆုံ ဇော်ပိုင် .mp3 - L ဆိုင်းဇီ သွားစို့ အဝေး.mp3 - L ဆိုင်းဇီ မလွမ်းရဲသေးဘူး .mp3 - L ဆိုင်းဇီ ဟိုတုန်းကလို .mp3 - L ဆိုင်းဇီ အချစ်အတွက်ကံမကောင်ခဲ့သူ .mp3 - L ဆိုင်းဇီ မပြောင်းလဲတတ်တဲ့ ငါ့ရင်ထဲ .mp3 - မိန်းကလေးအချစ် .mp3 - မိန်းကလေးအချစ် .mp3 - ခင်ဘုဏ်း မင်းအချစ်သာစစ်ပါစေ .mp3 -လိပ်စာပေးပါ အိုဇုန်းအဖွဲ့ .mp3 - ဝေးဦးမှာလား အာဇာနည်+L ဆိုင်းဇီ .mp3 - နတ်သမီးလေး ဂရေဟမ် .mp3 - ပြန်လိုချင်တယ် L လွန်းဝါ.mp3 - အချစ်နဲ့ဘဝ - အယ်လ်နောင်း.mp3 - အင်းယားသို့ .mp3 - အဖြူရောင်သံစဉ်.mp3 - နေချင်တယ်မင်းအနား.mp3 - ခင်ဘုဏ်း မိုးပြေး .mp3 - ကာရံမလှတဲ့အတွေး Remix သူသူ .mp3 - ဘဝရဲ့တံခါး Remix ချစ်ကောင်း.mp3 -ဖြူဖြူကျော်သိန်း အနီးဆုံးလားအဝေဆုံးလား အင်္ဂလိပ်.mp3 - Numa numa Remix အင်္ဂလိပ်.mp3 - Titanic remix အဂ်လိပ်.mp3 - Home again အင်္ဂလိပ်သီချင်း .mp3 - ဆောင်းဦးရွက်ကြွေ ဇတ်ဝင်သီချင်း .mp3 - လွမ်းမပြေ ဇတ်ဝင်သီချင်း .mp3 - ချစ်စံအိမ် ဇတ်ဝင်သီချင်း MP3 ရဲလေးနောက်ဆုံးထွက် တတိယ ကာရံ အခွေမှ သီချင်းများ 13.မနှုတ်ဆင်ချင်ဘူးRemix.mp3 - 12.တစ်ယောက်တစ်မျိုး.mp3 - 11.နတ်သမီး.mp3 - 10.မင်းနဲ့ပျော်ချင်လို့.mp3 - 9.ရိုးမြေည.mp3 - 8.မဟုတ်ရပါဘူး.mp3 - 7.ကောင်ကလေးကကောင်မလေးကို.mp3 - 6. မနှုတ်ဆက်ချင်ဘူး.mp3 - 5. ဝမ်းတူးဝမ်းတူး.mp3 - 4.တို့နှစ်ယောက်အကြောင်း.mp3 - 3.ဘာစားမလဲအကို.mp3 - 2.ကိုယ့်ရဲ့ကွက်လပ်.mp3 - 1.ငါဘာမှမသိ.mp3 အာဇာနည်၏သီချင်းကောင်းများ ရင်ခွင်သစ် အာဇာနည် .mp3 - ရွှေလည်တိုင် အာဇာနည် .mp3 - စည်းတစ်ဘက်ခြား အာဇာနည် .mp3 - မင်းနဲ့ နီးချင်ပြီ အာဇာနည် .mp3 - ကြေပါစေ အာဇာနည် .mp3 - ခွင့်ပြုတယ်ခွင့်လွှတ်တယ် အာဇာနည် .mp3 - ကိုယ့်အနားရှိစေချင် အာဇာနည်.mp3 - ဂန္ဒဝင်ဆည်းဆာ အာဇာနည် .mp3 မျိုးကြီး ၏အကောင်းဆုံးသီချင်းများစုစည်းမှု့ ဆန့်ကျင်ဘက် မျိုးကြီး .mp3 - နေရောင်အောက်က မျိုးကြီး .mp3 - ပြေးလို့ကြိုပါ မျိုးကြီး .mp3 - နေခဲ့တော့ မျိုးကြီး .mp3 - နေ့သစ်တွေရှိမယ် မျိုးကြီး .mp3 - မင်းသိဖို့ကောင်းတယ် မျိုးကြီး .mp3 - မလာပါနဲ့ မျိုးကြီး .MP3 - ပြောမရဘူး မျိုးကြီး.mp3 - လေပြေ မျိုးကြီး .mp3 - ကတ္တီပါလမ်းခွဲ မျိုးကြီး .MP3 - အပြစ်တစ်ခုဖန်ဆင်း မျိုးကြီး.mp3 - ပြန်လာချိန်လေး မျိုးကြီး.MP3 ဘယ်သူမှ အာဇာနည်+စည်သူလွင်.mp3 - နားလည်ပါ Big bag.mp3 - မင်းအကြောင်းအိမ်မက် L လွန်းဝါ+စည်သူလွင်.mp3 - အတူတူဆိုရင် ထွဏ်းထွဏ်း+လေးလေးဝါး.mp3 - တို့ချစ်တဲ့ကမ္ဘာ အဖွဲ့ .mp3 - ထာဝရဖြစ်စေ Lဆိုင်းဇီနှင့် အဖွဲ့.mp3 - ရတုအဆက်ဆက် ဆူဇီ.mp3 - စိတ်ညစ်မှာဆိုး L လွန်းဝါ+ဆူဇီ .mp3 -My love.mp3
flashsong ပြုလုပ်နည်း လမ်းညွှန်
1.Crazier - taylorswift Listen Download
2.My Love - Westlife Listen Download
3.Blue night Listen Download
4.Pretty Boy Listen Download
5.Jingle-bell Listen Download
6.Love you and Love me Listen Download
7.Take me to your heart Listen Download
8.Everyday I Love you Listen Download
9.Promise Don't Come Easy Listen Download
10.Miss You - Westlife Listen Download
11.SpeaksoftlyloveAndyWilliams Listen Download
12.Waiting Listen Download
13.WomanInloveBarbarastreis Listen Download
14.Youarenotalone Listen Download
15.Youmeaneverythingtome Listen Download
16.Soledad Listen Download
17.TearsInHeaven Listen Download
18.Thedayuwentaways2 Listen Download
19.ThoseWereThedaysMaryHopkin313 Listen Download
20.TieayellowRibbonRoundTheOleoakTree Listen Download
21.25Minutes01 Listen Download
22.AceofSorrow Listen Download
23.AllIHaveTodoIsDream Listen Download
24.AlloutofLoveAirSupply14 Listen Download
25.FoolAgainWestLifell114 Listen Download
♫ မြန်မာသီချင်းများ - ၁
၁. အလွမ်း - လေးဖြူ နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၂. အချစ်အတွက်ကံမကောင်းခဲ့သူ - Lဆိုင်းဇီ နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၃. အမောပြေ - ဇော်ပိုင် နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၄.အပြုံးလေး - အေသင်ချိုဆွေ နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၅.ချစ်ကံဆိုး - ညီရဲ+ကြိုးကြာ နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၆.ကြယ်ကြွေသွားသည့်တိုင်- မျိုးကြီး နားဆင်၇န် ဒေါင်းရန်
၇.ရေစီးကြောင်းသံယောဇဉ် -် Lဆိုင်းဇီ နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၈.ရင်ကွဲကာမှ - Lလွန်းဝါ နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၉.မျက်နှာများတဲ့မောင် - ရတနာဦး နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၁၀.ပြန်လာပါကွယ်စိတ်ပူတယ် - ဝိုင်ဝိုင်း နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
♫ မြန်မာသီချင်းများ - ၂
၁.အမေ - G Lay နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၂.ချစ်တယ်ဟုတ် - Bunny Phyo နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၃.ကြိုနေစေချင်တယ် - G Latt နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၄.နှင်းဆီ - ယုဇန နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၅.ကိုချစ်ရသူ - G Lay နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၆.ကျောင်းသီချင်း - G Lay နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၇.လမင်းသို့ - COSY နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၈.မလွယ်ပါကွယ် - မေသူ နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၉.မိုးသည်းထဲမှာ - ဝိုင်ဝိုင်း နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၁၀.မုန်းမေ့ဖို့ မလွယ် - ရတနာဦး နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
♫ မြန်မာသီချင်းများ - ၃
၁.နင်ပြန်လာခဲ့ - ထူးအယ်လင်း နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၂.စာမျက်နှာတစ်ဆယ့်ငါး - လေးဖြူ နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၃.ပေးဆပ်ခွင့် - NG2K နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၄.ဆုတောင်းမယ် - ဇော်ပိုင် နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၅.သီချင်းမဲ့ဂီတာ - ဝိုင်ဝိုင်း နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၆.မျက်နှာ - IMP နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၇.သဲသဲလှုပ် - နေ့သစ်ချို နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၈.ဖူးစာရှင် - နေနေ နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၉.နတ်သမီး - ရဲလေး+Ah Boy+အစ္စဏီ နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၁၀.ဝေခွဲမရပါလား - L ဆိုင်းဇီ နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
♫ မြန်မာသီချင်းများ - ၄
၁.ကောင်မလေး - G Lay နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၂.ပုံနရိပ်လေး - ရိန်မိုး နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၃.အချစ်ကိုသိချိန် - မီးမီးခဲ နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၄.ချစ်လို့ နေပါမည် - ဟဲလေး နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၅.မင်းတယောက်သာ - blueberry နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၆.ကိုမညာတော့ဘူး - Nကိုင်ရာ နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၇.အလွမ်းပြေအနမ်း - Bunny Phyo နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၈.ချစ်သမီးလေး - ထူးအိမ်သင် နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၉.မညီမျှခြင်း - ချမ်းချမ်း နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၁၀.သတိရရဲ့လား - ဟန်ထူးလွင် နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
♫ မြန်မာသီချင်းများ - ၅
၁.သူသိပါကွယ် - ဖြိုးကြီး+ကြိုးကြာ နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၂.ကမ္ဘာကျော်စိတ်ကူး - Doreme နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၃.အိမ်မက်ချစ်သူ - မဒီ နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၄.လွမ်းနေပြီ - မြင့်မြတ် နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၅.မုန်းဖို့လွယ်တယ်မေ့ဖို့ခက်တယ် - သြရသ နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၆.မင်းရဲ့တစ်မျက်နှာ - ဟဲလေး+ချမ်းချမ်း နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၇.အလွမ်းဆုလဒ် - ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၈.ရှိနေမယ် - ဟန်ထွန်း နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၉.အပြာရောင်အချစ်ည - မျိုးကြီး နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၁၀.ယုံကြည်ပေးပါ - Bunny Phyo နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
♫ မြန်မာသီချင်းများ - ၆
၁.ဆန္ဒတစ်စုံ - ဝိုင်းဝိုင်း+မဒီ နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၂.နောက်ဆုံးရင်ခွင် - Rဇာနည် နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၃.တစ်ကယ်ဆိုရင်အချစ်ပဲလိုတယ် - ချမ်းချမ်း နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၄.အလွမ်းတွေနဲ့သီချင်း - စည်သူလွင်+သစ္စာ နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၅.ယုံကြည်သောအချစ် - ချမ်းချမ်း နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၆.မျောက်ဖြစ်ချင်တယ် - ခန့်ဖြိုး နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၇.ကောင်လေးကကောင်မလေးကို - ရဲလေး+အစ္စဏီ နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၈.ပြန်မဆုံဖြစ်ကြရင် - Vနိုထွန်း နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၉.လမင်းနဲ့ပင်လယ် - ဝိုင်ဝိုင်း နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၁၀.ငါ့ရဲ့လမင်း - လေးဖြူ နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
♫ မြန်မာသီချင်းများ - ၇
၁.Stay With Me - Bunny Phyo နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၂.နောက်ဆုံး - အယ်ဖြူ နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၃.အမြဲတမ်းအတွက်မင်း - စည်သူလွင် နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၄.ဘာဖြစ်ဖြစ်ချစ်တယ် - ဟဲလေး နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၅.ချစ်ခဲ့တာလားရူးခဲ့တာလား - ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၆.ကြယ်ကြွေကောင်းကင် - စိုးဇော်ပိုင် နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၇.I Miss You - ရေဗက္ကာဝင်း နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၈.နှုတ်ဆက်စာ - သဇင် နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၉.ထာဝရ - မို့မို့ နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၁၀.နင်စေရင် - ပူစူး နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
♫ မြန်မာသီချင်းများ - ၈
၁.နှစ်ပတ်လည် - Bunny Phyo နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၂.လွမ်းရဲမှ - ဟဲလေး နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၃.မိုး - ရဲလေး နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၄.လမ်းမကြီးရဲ့ဘေး - ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၅.မင်းတစ်ယောက်သာ - နေမျိုး နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၆.အလွမ်းဝင်္ကပါ - အစ္စဏီ နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၇.မိုးစက်တင်လေ - လွှမ်းမိုး နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၈.တောင်းတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ဝရစေသား - ရတနာဦး နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၉.ကြိုနေတော့ - ရိန်မိုး +ရတနာမိုင် နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၁၀.ဖက်ထားမယ် - နော်နော် နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
♫ မြန်မာသီချင်းများ - ၉
၁.မနှုတ်ဆက်ချင်ဘူး - ရဲလေး+အိမ်ချစ် နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၂.မင်းနဲ့ဝေးရာ - နီတာ နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၃.ပြော - G Latt နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၄.လေပြေညင်း - ကိုရဲ နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၅.မင်းအကြောင်းအိမ်မက် - Rဇာနည်+Lဆိုင်းဇီ နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၆.စလုံးကချစ်သူ - 9one နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၇.အဖြူရောင်သူငယ်ချင်း - အောင်ပြည့်ဖြိုး နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၈.ကိုကိုက - ချမ်းချမ်း နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၉.တစ်ဖက်သက် - ကြိုးကြာ နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၁၀.အချစ်အိမ်မက်လေး - ရဲလင်း နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
♫ မြန်မာသီချင်းများ - ၁၀
၁.ဘာတွေဖြစ်ဖြစ် - Bunny Phyo နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၂.အလွမ်း - ဟဲလေး နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၃.ချစ်သူရဲ့ပုံပြင် - Aနွန် နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၄.မင်း - ထူးအယ်လင်း+မီးမီခဲ နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၅.မျှော်လင့်ခြင်းတသက်တာ - ဖိုးကာ နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၆.မဝေးတဲ့ချစ်ခြင်း - Nကိုင်ရာ နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၇.သူပျော်နိုင်ပါစေ - အယ်နောင်း နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၈.ပြုံးပါ - ရိန်မိုး နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၉.မမေ့နိုင် - ဖြိုးကြီး နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၁၀.နေညိုရင်ငါတို့လမ်းခွဲမယ် - လင်းနစ် နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
♫ မြန်မာသီချင်းများ - ၁၁
၁.ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက် - စိုင်းစိုင်း+သီရိဆွေ နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၂.ကြင်ယာဖက် - ဟဲလေး နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၃.မင်းအနားမှာ - အဲလက်စ် နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၄.တိတ်တခိုးအချစ် - ရိန်မိုး နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၅.အရေးမကြီးဘူး - လေးဖြူ နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၆.အချစ်တို့ပြန်ပေးပါ - ဧကရီ နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၇.တစ်မိုးအောက် - ပူစူး နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၈.တွဲလက်များ - ထူးအယ်လင်း+မီးမီးခဲ နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၉.မိန်းကလေးပါ - ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
၁၀.နေပါစေ - ချမ်းချမ်း နားဆင်ရန် ဒေါင်းရန်
♣ SWF မှ Mp3 ပြောင်းလဲပုံ
အရင်တုန်းက ကျတော် iwisoft Flash Converter အကြောင်းရေးသားပြီးပါပြီး။ဒါပေမယ့်မပြည့်
စုံဘူးထင်လို့ နောက်ထပ်ပိုစ့်အသစ် တစ်ခုပြန်ရေးလိုက်ပါတယ်။ခုရေးမှာက Flash(SWF)နဲ့ပါတ်
သက်တဲ့အကြောင်းကို အဓိကထားပြီးရေးပါမယ်။အင်တာနက်ပေါ်က Flash သီးချင်းလှလှလေးတွေ
ကို Video ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် Mp3 ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်လည်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီပိုစ့်ကိုသာ အစအ
ဆုံးဖတ်လိုက်ပါ။သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကပြောတယ် သူကြိုက်တဲ့ Flash သီးချင်းတွေကို အခွေ
ထုတ်ချင်တယ်လို့ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘူးတဲ့.....ကျတော်လည်းသူ့ကိုပြောပြလိုက်တယ်...
ဒီလို ဒီလိုပေါ့ ခေါင်းညိတ်ပြီးပြုံးလို့ပြီးတော့သူ့လိုမျိုး ပြုလုပ်ချင်တဲ့သူတွေ အဆင်ပြေအောင်
ဘလော့မှာပိုစ့်တင်လိုက်ပေါ့တဲ့ ဒါနဲ့သူ့ရဲ့အကြံပေးချက်နဲ့ ကျတော်ဒီပိုစ့်ကိုရေးဖြစ်ခဲ့တာပါ......
Flash (swf) ဖိုင်တွေကို Mp3 သီချင်းပြောင်းချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် Video Format ပြောင်းချင်တာပဲဖြစ်
ဖြစ် လိုအပ်တဲ့ ဆောဖ်ဝဲက တစ်ခုတည်းပါ။အဲဒါကတော့ Iwisoft Flash Converter ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံး Iwisoft Flash Converter ကို ဒီမှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ။
ပြီးတော့ စက်ထဲမှာ အင်စတောလုပ်လိုက်ပေါ့။
အင်စတောလုပ်လို့ပြီးရင် ဖိုင်ထဲမှာ ကျတော်ပေးထားပြီးးသား Crack ဖိုင် ကိုအသုံးပြုပြီး
Register လုပ်လိုက်ပါ။ဒါမှသုံးရတာအဆင်ပြေမှာ နို့မို့ Trail Version နဲ့ဆိုစိတ်ညစ်ရဦးမယ်။
Register လုပ်တာက တခြားနဲ့မတူဘူး။ခုဆောဖ်ဝဲက Cracking လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်
Serial Numbers တွေမလိုအပ်ပါဘူး။
Crack ဖိုင်ကိုဖွင့်လိုက်ရင်ဒီအတိုင်မြင်ရမယ်။ပြီးရင် Crack it now ကိုနိုပ်.....ဝင်းဒိုးတစ်ခုပေါ်လာ
မယ်။သူရွေးခိုင်းတဲ့ဖိုင်ကို ရွေးလိုက် ပြီးတော့ OK ပေါ့။
ခုမှ Full Version ကိုသုံးရမှာ.......
ဆောဖ်ဝဲကို Run လိုက်ပါ။အောက်ပါအတိုင်း..............
ဒီမှာအသုံးပြုလိုရနိုင်ပေမယ့် တစ်ခုချင်းပဲ Convert လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီမှာတစ်ခုကောင်းတာ
က Flash တစ်ပုဒ်လုံးကို မလိုချင်သူများ ကိုလိုချင်သလောက် စမှတ် ဆုံးမှတ် သတ်မှတ်ပြီးတော့
လိုသလောက်ပဲ Convert လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီဟာက ဘာအတွက်ကောင်းသလဲဆိုတော့
Animation Gif လုပ်ရာမှာပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ဖိုင်တစ်ခုလုံးကို Convert လုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့
တစ်ခုပြီးတစ်ခု တစ်ပုဒ်ပုဒ် Convert လုပ်ရတာဆိုတော့ သိပ်တော့အလုပ်ဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူး။
ဒါဆို ပုံမှာ မြှားပြထားတဲ့နေရမှာ Switch to Batch mode ကိုနိုပ်လိုက်ရင်အောက်ပုံအတိုင်း
ဒီတစ်ခါတော့ သီးချင်းဖိုင် အများကြီးကို တစ်ခါတည်း Convert လုပ်နိုင်ပါပြီး......
Convert လုပ်မယ့် သီချင်းဖိုင်များပေါင်းထည့်ရန်
Convert လုပ်ပြီးထွက်လာမယ့် ဖိုင်အမျိုးအစား
Convert လုပ်ပြီးထွက်လာမယ့် ဖိုင်အမျိုးအစား ကိုစိတ်ကြိုက်ပြောင်းရန်
Convert လုပ်ပြီး Video / Mp3 / ပုံများရောက်ရှိမယ့်နေရာ
Pause နိုပ်ပြီးလိုချင်တဲ့ပုံကို ရိုက်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ် Convert လုပ်ချင်တဲ့ဖိုင် ပြည့်ပြီးဆိုရင် စပြီး Convert လုပ်ဖို နိုပ်လို့ရပါပြီး နည်းနည်းတော့ကြာမယ်
သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ၅ မိနစ်လောက် စောင့်ရမယ်ထင်တယ်။ခုပုံမှာ ကျတော်လိုချင်တဲ့ Video
Format ကတော့ AVI ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့တခြားလိုချင်တယ်ဆိုရင် နံပါတ် ၃ နေရာမှာ
ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ Video Format များကတော့
SWF to MPEG (VCD / DVD)
SWF to MP4 (PSP / PS3)
SWF to MP4 (iPod /iPhone /Apple TV)
SWF to 3GP (Moblile)
SWF to Zune (Microsoft)
SWF to WMV (Windows Media)
SWF to Windows Mobile
SWF to FLV (Youtube Video)
SWF to Mov (Quick Time)ဖြစ်ပါတယ်။
SWF to Picture (BMP / PNG / JPEG / GIF / Animated GIF)
ပုံထဲမှာ လှုပ်တာလေးတွေလိုချင်ရင်တော့ Animated GIF ကိုရွေးလိုက်ပေ့ါ။
နောက်ဆုံး VCD လုပ်ချင်သူများအတွက် Nero6Ultra Edition ကိုလည်းတစ်ခါတည်းဒေါင်း
Tags: ., .., ..., /, 102.7fm, 19:18, 2plus, 9mm, acid, ajl, akk, antibiotic, any, aကရာဇ်, b-lord, babycakes, beyond lord family, biggy - y, black hole, bunnyphyo, burn sticks, calory, cartoon, cellular, chapter, chilli family, cobra, cool stars, crab, d-beez, dယံ, examplez, firecracker, fish in car, five o’ clock, flux, g - tone, g tone, g လေး, g-3, ice cream, idiots, imp, international album, j-me, j-t, jumpa, krystal, l လွန်းဝါ, l.r.c, lady gaga, loop, lခွန်းရီ, m သီဟ, mc freedy, mc ဇေရဲ, mhl, nc -13, ngiik, no, nကိုင်ရာ, ontrack, opposite, oxygen, pal, platform, popcorn, rc, red energy, reviver, roll-1, rဇာနည်, sno, subject, system, target, teen, teens, the ants, the first, the lads, the rays gruop, theory, tiger girls, tiny twist, tps, upgrade, valentine albums, vcd, vနိုထွန်း, wai လျှံ, wanted, wine, x-rays, y m n, yak, ykg, yoshi, yoyo, ကဗျာဘွဲ့မှူး, ကဗျာဘွဲ့မှုး, ကာတွန်း, ကိုကိုမောင်, ကိုင်ဇာ, ကိုအောင်, ကျားပေါက်, ခင်ဘုဏ်း, ခင်သီတာထွန်း, ခင်မောင်တိုး, ခင်မောင်ထူး, ခင်ဝမ်း, ခန့်ဖြိုး, ခမ်းဆိုင်, ခရစ်တိုဖာ, ခရီးသွားငါးယောက်, ခိုင်ရွှေဝါ, ခိုင်မြဲသာ, ခိုင်ထူး, ခိုင်သင်းကြည်, ချစ်ခိုင်, ချစ်စမ်းမောင်, ချစ်သုဝေ, ချစ်ကောင်း, ချမ့်ခိုင်, ချမ်းချမ်း, ချမ်းအေးဝင်း, ချိုပြုံး, ချိုပြုံး, ခွန်းဆင့်နေခြည်, ဂရေဟမ်, ဂျက်မြသောင်း, ဂျန်နီ, ဂျယ်လီ, ဂျီလတ်, ငယ်ငယ်, ငယ်ဆူး, ငဲငယ်, စင်ဒီ, စည်သူလွင်, စိုင်းလိက်, စိုင်းဟောင်းခမ်း, စိုးမြတ်နန္ဒာ, စီယံ, စုမိ, စိုင်းစိုင်း, စိုင်းဆိုင်မောဝ်, စိုင်းထီးဆိုင်, စိုးပိုင်, စိုးလွင်လွင်, စိုးပြည့်သဇင်, စံပီး, စံလင်း, စန္ဒီမြင့်လွင်, စန္ဒရားချစ်ဆွေ, စန္ဒီမြင့်လွင်, ဆက်ပိုင်ကောင်း, ဆင်ပေါက်, ဆိုင်ကလုန်း, ဆွီတီ, ဆုန်သင်းပါရ်, ဆူဇီ, ဇင်အောင်, ဇင်းဇင်, ဇမ်နူး, ဇိုင်းယ်, ညီငယ်, ညီပု, ညီပုလေး, တင်ဇာမော်, တင့်တင့်ထွန်း, တာရာ, တူးတူး, တူးဘစ်, တွင်ကယ်လ်, ထက်နေကြည်, ထုးအယ်လင်း, ထူးအယ်လင်း, ထူးအိမ်သင်, ထရေစီ, ထွဋ်ခေါင်ဦး, ထွဏ်းထွဏ်း, ထွန်းထွန်း(example), ထွန်းအိန္ဒြာဗို, ဒိုရေမီ, ဒိုးလုံး, ဒီဥက္ကာ, ဒီဂျေသားငယ်, ဒီဂျေဂျေး, ဒီဂျေသော်သော်, ဒီလေး, ဓီရာမိုရ်, နန်းခမ်းနွဲ့လိတ်, နန်းဆုရတီစိုး, နီတာ, နန္ဒစိုင်း, နန္ဒာ, ပိုးဒါလီသိန်းတန်, ပုလဲဝင်း, ပိုးရည်, ပူစူး, ဖရန်ကို, ဖိုးကာ, ဖိုးဖန်, ဖိုးကာ, ဖိုးကျော်, ဗစ်တာခင်ညို, ဗဒင်, ဗလ, ဗုံဗုံ, ဘမ်ဘီနို, ဘရိတ်ကီ, ဘလူးဘယ်ရီ, ဘာဘူ, ဘိုငယ်, ဘီလီထွန်း, ဘိုဘို, ဘိုလေး, ဘိုဖြူ, မင်းထက်ကျော်ဇင်, မင်းမင်းဦး, မင်းမော်ကွန်း, မဒီ, မယ်လိုဒီ, မာရဇ္ဇ, မိုးစက်, မိုးမိုး, မိုးသက်တင်, မိုင်းသျှန်ခမ်း, မိုနိုပိုလီ, မို့မို့ဇော်ဝင်း, မီမီဝင်းဖေ, မီးမီးခဲ, မို့မို့, မျိုးမဟာကျော်, မျိုးမျိုး, မျိုးကျော့မြိုင်, မျိုးကြီး, မျိုးကျော့မြိုင်, မွန်းအောင်, ယိင်းယိင်း, ယုဇန, ယုန်လေး, ရင်ဂို, ရင်ဂို, ရည်မွန်, ရတနာ, ရတနာမိုင်, ရတနာမိုင်, ရတနာဦး, ရတု, ရန်ရန်ချန်း, ရန်အောင်, ရသ, ရာစု, ရာဇာနေ၀င်း, ရိမ်မိုး, ရဲသွင်, ရဲလေ, ရဲအောင်, ရှင်ဖုန်း, ရှင်မင်းအိ, လင်းနစ်, လင်းရာ, လင်းလင်း, လင်းသူ, လာဇရု, လှိုင်ဦးမော်, လွှမ်းမိုး, ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း, သဇင်, သန်းဝင်းထူး, သရဖီတင်, သအို, သာစိုး, သားစိုး, သားထွေး, သားကြီး, သိဏ်းလင်းစိုး, သိရီဆွေ, သီရိဂျေမောင်မောင်, သီရိဆွေ, သီအိုရီ, သဲနုမာ, သံသာဝင်း, သျှီ, ဟန်ထွန်း, ဟယ်ရီလင်း, ဟိုအဖွဲ့, ဟဲလေး, အက်စကဲနက်, အငဲ, အစိုင်း (black hole), အစ္စဏီ, အနဂ္ဂ, အန်းနော်, အယ်လ်ခွန်းရီ, အယ်လ်ဆိုင်းဇီ, အယ်လ်လွန်းဝါ, အယ်နောင်း, အယ်ဖြူ, အရိုး, အာဇာနည်, အာဖြိုး, အိစံ, အီတိုး, အဝေးကဧည့်ခန်း, အဲလက်စ်, အကြည်တော်, ဥက္ကာဦးသာ, ဥာဏ်လင်းအောင်, ဧကရီ, ကေဇင်ထူးလွင်, ကောင်းဆက်, ကောင်းဇုံ, ကောင်းထိုက်, ကောင်းမြတ်, ကော်နီ, ကော်ဘရာ, ကျော်စည်သူကျော်, ကျော်ထွဋ်ဆွေ, ကျော်သူစိုး, ချောစုခင်, ဂျေညီညီ, ဂျေမီ, ဂျောက်ဂျက်, ဂျေမောင်မောင်, စောခူဆဲ, စောညီညီ, ဆောင်းဦးလှိုင်, ဆောင်းဦးလှိုင်, ဇော်ပိုင်, ဇော်ပိုင်, ဇော်ဝင်းထွဋ်, တေဇ, တောင်ဆိုရန်, ဒွေး, နေမျိုး, နေမျိုးဆေး, နောင်နောင်, နောနော်, နေဇော်, နေနေ, မေခလာ, မေစံပယ်ညို, မေစံပယ်ညို, မေဆွိ, မေသန်းနု, မေသူ, မောင်မောင်ဇော်လတ်, ရေဗက္ကာဝင်း, ရေဗက္က၀င်း, ရွှေထိုက်, ရွှေထိုက်, လေးလေးဝါး, လေးဖြူ, ဟေမာနေ၀င်း, အေသင်ချိုဆွေ, အောင်ခန်, အောင်ခန့်, အောင်ဘု, အောင်ရင်, အောင်ရဲလင်း, အောင်ကောင်းထက်, အောင်နိုင်, အေးချမ်းမေ, အေးဝတ်ရည်သောင်း, မြေပဲယို, မြေပဲယို, ဝေဖန်ပေးကြပါ.., ပြည်လှဖေ,